Eyona mfihlo igcinwe kakuhle ngaphakathi kweXbox One X ityhilwe | Iindaba zeGajethi
Iinkampani ezininzi zikhetha ukufihla into eyaziwayo amaqanda e-easter Ngaphakathi kwimidlalo yevidiyo abayiphuhlisayo, akusoloko kunzima ukuyifumana, kodwa ngamanye amaxesha iyintsomi eyinyani. Abavelisi behardware abangakumbi bayazibandakanya nale meko, eyokugqibela yiMicrosoft kunye neXbox One S.
Inkampani yaseRedmond ifihle imfihlo encinci kwisibindi sokuba yeyiphi eyona nto inamandla kakhulu kwintengiso, kodwa kuhlala kukho i-YouTuber enomdla wokusika ezi ntlobo zeemveliso ukwanelisa umdla wamakhulu amawaka wabasebenzisi beYouTube. Makhe sibone ukuba oku kubandakanya ntoni iqanda lepasika ukuba inkampani yeMicrosoft ifihliwe kwiXbox One X.
Abathandi abaninzi bembali yeXbox bayazi kakuhle ukuba yintoni iNkosi eyiNtloko, kangangokuba iqela le-UnoCero kwisiteshi sabo se-YouTube lisifundise ngokusondeleyo. Ukuyibona, nangona kunjalo, kuya kufuneka siyisuse iwaranti, njengoko kuya kufuneka singene kwibhodi yesekethe yeXbox One X ukuba sifuna ukuyibona. loo Master Chief ekhwele emva koonomadudwane (kucace gca ukuba Iprojekthi yeScorpio) ukuba bathathe isigqibo sokukrola isitya.
Ayisiyiyo kuphela isimanga, njengoko usazi kakuhle, iXbox One X inyusa kungekho ngaphantsi kwe-12 GB ye-DDR5 RAM kunye ne-6 teraflops GPU. Ikhonsoli ekwaziyo ukuhambisa imidlalo kwisisombululo se-4K kunye ne-60 FPS ikhutshiwe ngokupheleleyo, kangangokuba siye sabona isimilo sikaHalo. INintendo yenxalenye yayo ikwafihlile iinkcukacha ezahlukeneyo zolu bungakanani njengamabinzana kwikhowudi ye-NES Mini Mini kunye nee-serigraphs kulawulo lweNintendo Shintsha, kubonakala kuyinto iinkampani zongeza ngaphezulu, kucacile, zibanika isiciko esingaqhelekanga kwimidiya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Eyona mfihlo igcinwe kakuhle ngaphakathi kweXbox One X ityhiliwe
Ngoku unokukhuphela iDemo yeGran Turismo Sport kwaye ezi zimoto zakho